Ranomafana: Fanatsarana ny Fandriampahalemana
Posted on décembre 27, 2018 décembre 27, 2018 by dsi
Notolorana fitaovana mahomby ho entina miady amin’ny fisian’ny tsy fandriampahalemana ny Faritry Ranomafana, Distrika Ifanadiana.
Notontosaina tamin’ny alakamisy 13 desambra 2018 lasa teo ny fanolorana fiara tsy matahodalana iray na « 4X4 » ho an’ny komandin’ny Tobim-paritry ny zandarimarian’ ny Ranomafana. Andriamatoa Minisitry ny Fizahantany Jean Brunelle Razafintsiandraofa no solotenan’ny Fitondram-panjakana, nanolotra tamin’ny fomba ofisialy izany Fiara izany.
Nampahery sy nampitraka ihany koa ny fianakaviamben’ny zandarimariam-pirenena tao an-toerana ary nitondra ny teny fampiononana ho an’ ny fianakavian’ireo izay lavo am-perinasa Andriamatoa Ministra.
Notsindriany manokana amin’ny maha zanaky ny Faritra azy ny tsy fanekeny an’i Fanadiana na i Ranomafana no manjary “zone rouge” , ka nanentana ny vahoaka, ny fokonolona, ny rehetra ny tenany, ny tokony mba handray anjara sy hifanome tanana amin’ny fampitana vaovao hiadivana amin’ny tsy fandriampahalemana.
Tsara ho marihina fa Andriamatoa Praiministra Lehiben’ny Governemanta, Ntsay Christian no naniraka ny Minisitry ny Fizahantany hanolotra an’ilay fiara ho fanatanterahana ny fampanantenana nataony, amin’ ny teny sy ny toky nomeny.
Nahitana vokatra sahady ny fahazoana io fiara tsy mataho-dalana io ny ampitson’iny satria dia tratran’ireo Mpitandrofilaminana tao Pylône Ifanadiana ny zoma 14 desambra 2018 ny andian-dahalo.
Source : MinTour/ Laza Rajaonarivelo
Ministeran’ny Fizahantany : mirary fetin’ny krismasy sy taom-baovao sambatra
Fiarahabana nahatratrarana ny taona vaovao 2019